Bit By Bit - Mass mmekota - eme
[ , , ] Otu n'ime ihe ndị kasị akpali akpali a na-ekwu site Benoit et al. (2015) on ìgwè mmadụ-nzuzo nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị manifestos bụ na-ewetara ha reproducible. Merz, Regel, and Lewandowski (2016) na-enye ohere ka Manifesto Corpus. -Agbalị mụta nwa Fig 2 si Benoit et al. (2015) site na iji ọrụ site Amazon Mechanical Turk. Otú ahụ ka gị na ya pụta?
[ ] Na InfluenzaNet oru ngo a afọ ofufo panel nke ndị mmadụ na-akọ ihe omume, jupụta ebe nile, na ahụ ike na-achọ omume metụtara influenza-dị ka-ọrịa (ma ọ bụ) (Tilston et al. 2010; Noort et al. 2015) .
Tụlee na okpụhọde imewe,-akwụ ụgwọ, na-abụ na njehie na InfluenzaNet, Google Flu Trends, na omenala influenza nsuso usoro.
Tụlee otu ihe edozibeghị oge, dị ka ahụ ọkụ ezì ntiwapụ. Kọwaa kwere omume na njehie na onye ọ bụla usoro.
[ , , ] The Economist bụ a-enwe kwa izu akụkọ magazine. Ike a ụmụ mmadụ mgbakọ oru ngo ahụ ma ọ bụrụ na ruru nke ndị inyom na-ikom na cover ka oge na-aga.
The magazine nwere ike dị iche iche mkpuchite na asatọ iche iche n'ógbè (Africa, Asia Pacific, Europe, European Union, Latin America, Middle East, North America, na United Alaeze) na ha nwere ike niile ike ibudata site na website nke The Economist . Họrọ otu n'ime ndị a na mpaghara na-arụ analysis. Jide n'aka na-akọwa gị na usoro na-ezu ezu na ha nwere ike replicated bụ ndị ọzọ.
Ajụjụ a si n'ike mmụọ nsọ site a yiri oru ngo site Justin Tenuto, a data ọkà mmụta sayensị na crowdsourcing ụlọ ọrụ CrowdFlower , ịhụ "Oge Magazine n'Ezie nwere mmasị Dudes" .
[ , , ] Iwuli on ajụjụ n'elu, ugbu a igosi na analysis asatọ nile mpaghara.
Gịnị iche ị chọpụtara gafee na mpaghara?
Ụma ole na ego ole ka mere o n'ọtụtụ-elu gị analysis ka ihe niile asatọ nke mpaghara?
Iche na ndị Economist nwere 100 dị iche iche mkpuchite kwa izu. Na-eme atụmatụ otú ihe mmezi oge na ego ọ ga-ewe n'ọtụtụ-elu gị analysis ka 100 mkpuchite kwa izu.
[ , ] [Kaggle] (https://www.kaggle.com/) bụ a website na na akwado emeghe oku na-aga oru ngo. Isonye na otu n'ime ndị ọrụ.
[ ] Lee site na a na-adịbeghị anya nke nke a magazin n'ubi-gi. È nwere akwụkwọ a gaara reformulated ka emeghe oku na-aga oru ngo? Gịnị mere ma ọ bụ gịnị mere?
[ ] Purdam (2014) kwuru na a na-ekesa data collection banyere arịọ na London. Nachikota eme nke oma na adịghị ike nke a nnyocha imewe.
[ ] Redundancy bụ ụzọ dị mkpa na-amata àgwà nke na-ekesa data collection. Windt and Humphreys (2016) zụlite ma nwalee a usoro na-anakọta akụkọ banyere esemokwu ihe si ndị mmadụ na Eastern Congo. -Agụ akwụkwọ akụkọ ahụ.
Olee otú ha imewe hụ redundancy?
Ha na-enye ọtụtụ na-eru nso iji emere ebere ka data anakọtara site na ha oru ngo. Achịkọta ha. Nke bụ ihe kasị mma ikweta?
Gwa Abigel a ụzọ ọhụrụ na data nwere ike irè. Aro kwesịrị ịgbalị na-amụba obi ike na i ga-na data na a n'ụzọ na-eri-irè na usoro ziri ezi.
[ ] Karim Lakhani na ibe (2013) kere ihe na-emeghe oku na-aga iji rịọ arịrịọ ọhụrụ algọridim na-edozi nsogbu na mgbakọ usoro ndu. Ha natara ihe karịrị 600 nnyefe nwere 89 akwụkwọ mgbakọ na-eru nso. Nke nnyefe, ha natara 30 na karịa arụmọrụ nke US National Institutes of Health si MegaBLAST, na nke kacha mma nrubeisi enweta ma izi ezi ka ukwuu na-agba (1,000 ugboro ngwa ngwa).
-Agụ ha akwụkwọ, wee gwa Abigel a na-elekọta mmadụ research nsogbu nwere ike iji otu ụdị emeghe zoo. Karịsịa, ụdị emeghe zoo na-elekwasị anya na-ọsọ ọsọ ma rụọ ọrụ arụmọrụ nke otu dị na algọridim. Ọ bụrụ na i nwere ike na-eche nke nsogbu dị ka nke a n'ubi-gi,-agbalị ịkọwa ihe mere ọ bụghị.
[ ] Ọtụtụ mmadụ mgbakọ oru ngo ịdabere na sonyere na Amazon Mechanical Turk. Ịrịba ama-elu ịghọ onye ọrụ on Amazon Mechanical Turk. Emefu otu awa na-arụ ọrụ n'ebe ahụ. Olee otú nke a mmetụta echiche gị banyere imewe, àgwà, na n'ụkpụrụ omume nke mmadụ compuation oru ngo?